Echiche nke ihe ọ bụla na-elekọta mmadụ? N'ezie? | Martech Zone
Monday, August 16, 2010 Monday, December 29, 2014 Douglas Karr
Chei, nke a bụ nkwupụta si Avinash na ghostblogging:
Ọ bụrụ na ịnweghị oge ịde blọgụ, emela ya. Ghost ịde blọgụ bụ inaut ezigbo & nkwenye nke ihe niile na-elekọta mmadụ. #ihe nkiri cc @nwanyi_ocha
- Avinash Kaushik (@Nkezie) August 16, 2010
Ọ na-atọ ụtọ mgbe ọ bụla onye nwere ikike dịka Mitch or Avinash tụa a ọchịchị dị ka nke a. Ọbụghị naanị na anaghị m ekwenye na Avinash, amaara m ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ga-ekwenyeghị. Ịgba mmụọ mmụọ abụghị nsogbu nke ihe niile gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya ezighi ezi, emeghị ihe n'eziokwu, na enweghi obi ọcha bụ nkwenye nke ihe ọ bụla na-elekọta mmadụ.
A chụpụrụ ụlọ ọrụ iji mee ọtụtụ ihe na-enweghị ihe onwunwe kwesịrị ekwesị kemgbe ọtụtụ afọ. Accenture mere n’oge na-adịbeghị anya ọmụmụ nke gosipụtara nke ahụ emezughị ego, ụkọ nka, na ngwa ọrụ zuru ezu bụ ndị na-eme ka ngalaba azụmaahịa daa.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị enweghị usoro mmefu ego, enweghị ikike ma ọ bụ na enweghị ngwaọrụ ịde blọgụ? Agbanyeghị, ụlọ ọrụ gị nwere ọchịchọ ibipụta ma ihe ọmụma ma kesaa akụkọ ndị ahịa na-enweghị atụ n'ịntanetị. Ha nwere ike ime nke a ọnụ ala na ghostbloggers - ndị ghọtara etu esi ede ihe nke ọma, otu esi eji isiokwu ya rụọ ọrụ nke ọma, ma nwee ngwaọrụ ha chọrọ iji nyochaa ọganiihu nke onye ahịa ahụ. Ndị ghostbloggers nwere ike ịme ya nke ọma, ọsọ ọsọ, yana nsonaazụ dị ukwuu.
Enwere m ụfọdụ ndị na-ede blọgụ Martech Zone na m chukwu ghostblog maka… n'ihi na ha gara n'ihu ịgwa m na ha enweghị oge. Ya mere, ezigara m ha ajụjụ ziri ezi nke ha nwere. Ha weghachite nzaghachi na ụfọdụ ihe ntanetị na ntanetị nwere ike inye aka. M wee were ozi email ha, degharịa ya na blọgụ dị irè ma jụọ ha ikike ka ha tinye ya n'okpuru aha ha. Oge ọ bụla onye ahụ kwetara ozugbo ma kelee m maka ịme ọkwa ahụ.
Anọghị m ịkekọrịta na m dere n'ezie post… M nnọọ jụrụ ajụjụ. Nzaghachi ahụ ziri ezi, bụrụ eziokwu, ma kesara ndị na-ege anyị ntị ozi bara uru. Yabụ, anyị ghostblogged na nyere uru ka agụ. Nke ahụ ọ bụ nkwenye nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya? Echeghị m! Ọ bụ ezie na m nwere nkwanye ùgwù dị ukwuu maka Avinash, ọ bụghị ya na-edebe ihe niile mmadụ na net. Kpebiere onwe gị. Ọ bụrụ na ọ dị ire, mee ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị, emela.
Ekwuela m ya ugboro ugboro… ị chere na Barack Obama, a sị na ọ bụ otu n'ime ndị na-ekwu okwu oge anyị kacha mma, bụ onye a na-ekwukarị n'ihi na ọ naghị ede okwu nke ya? Ànyị na-eti ya ma gwa ya na ọ bụ nkwenye nke ihe ọ bụla ikwu okwu n'ihu ọha nwere? Mba! Anyị ghọtara na, dịka onye ndu nke ụwa nnwere onwe, o nwere akụrụngwa nke na-enyere ya aka iwepụta okwu edere na olu ya n'uche.
Ọ bụrụ na ịnweghị oge ịde ede mana ịchọrọ iwepụta okwu ahụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị… na ịchọrọ iji obi eziokwu na eziokwu, ghostblogging nwere ike ịbụ nnukwu atụmatụ. Anaghị m ekwu maka ịga na ịzụrụ isiokwu dị na ntanetị maka 5 buck pop. M ga kará »‹ á »‹ kará »‹ rá »‹ mma na-ede blá »gá» post post na nyere-agá »with ozi na ihe ha chá» rá »si na á» company lá »á» rá »ing ha na-eme nnyocha ...
Ma n'ezie, anaghị m akwado ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na a na-ama gị aka maka onye na-ede blọgụ gị, gwa ha eziokwu ahụ! Gị ghostblogger ga-ahụ gị n'anya maka ya.
PS: Edere m akwụkwọ ozi m niile.
Tags: avinashavinash kaushikmmmmmmmmmmmmmmitch joel